Ndị Ahịa | Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd.
Atụmatụ na usoro mmemme
Dị ka ndị ahịa chọrọ, nye ezubere iche, oru oma oru ngwọta, nwoke ịga ụlọ ọgwụ akụrụngwa na-akwado ụlọ ọrụ maka zuru ezu atụmatụ.
Nlekọta na ndozi
DTS nwere nke ya mgbe-sales otu, anyị nwere ike inye mgbe nile mmezi ọrụ maka ndị ahịa. Mgbe akụrụngwa gị nwere nsogbu, ndị injinia ahịa DTS nwere ike ịchọpụta ma duzie gị iji dozie nsogbu ndị ahụ. Mgbe onye ahịa enweghị ike dochie anya akụkụ ahụ mapụtara, DTS kwere nkwa ịbata n'ọdụ n'ime awa 24 na mpaghara anyị yana n'ime awa 48 na mpụga mpaghara ahụ.
DTS nwere ule nyocha. Facilitieslọ ọrụ ndị a zuru ezu iji mụta nwa kpọmkwem ọnọdụ nke mmepụta ụlọ ọrụ.
Ga-enweta enyemaka site na ndị ọkachamara ịmụrụ nwoke na ndị na-ahụ maka nri, wee nwee ike:
- Usoro nyocha na nyocha na-agagharị na ngwa (usoro, usoro, usoro mkpatụ)
- Gbalịa anyị akara usoro
- Tọọ usoro ịga ụlọ ọgwụ (nnwale nnwale) nke ejiri ngwa ọrụ F0)
- Nwalee nkwakọ ngwaahịa gị na usoro anyị
- Nyochaa ogo nri nke ngwaahịa gwụchara
Site n'enyemaka nke ndị mmekọ, a na-ejikwa ngalaba ule ahụ na mmepe nke ngwa ọrụ ụlọ ọrụ, dịka njuputa, akara na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
Nyocha ngwaahịa, usoro nhazi usoro
Needkwesịrị ịmepụta usoro nhazi usoro ọkụ?
- becomeghọwo onye nwe nganga nke DTS Retorts?
- Dochọrọ iji usoro ọgwụgwọ dị iche iche atụnyere ma bulie ụzọ isi gboo afọ gị?
- you na-emepe emepe ọhụrụ ngwaahịa usoro?
- change chọrọ ịgbanwe nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ?
- wantchọrọ ịlele uru F? Ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla ọzọ?
Ndị ọrụ gị niile nwere ike irite uru na ọzụzụ na-agbanwe agbanwe n'akụkụ dị iche iche
Operational ojiji nke retort, adabara beginners, ahụmahụ ma ọ bụ a ụfọdụ larịị pesonel
Enwere ike iduzi ọrụ anyị na mpaghara gị ma ọ bụ na LABS anyị, bụ nke e mere iji nabata ụmụ akwụkwọ ma mee ka ha jikọta ihe ọmụma na ahụmịhe bara uru. Nsonaazụ nyocha na nsonaazụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị.Ọ dịghị usoro mmepe na-akwụsị akụrụngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị, na-enye gị ohere ịchekwa oge, nwekwuo mgbanwe, ma gaa n'ihu na-arụ ọrụ ka a na-azụ gị.
Ma ọ bụghị ya, anyị nwere ike ịnwale ule niile n'onwe anyị na ụlọ nyocha ma soro ndụmọdụ gị. Naanị ị zitere anyị ihe nlele nke ngwaahịa gị ma anyị ga-enye gị akụkọ zuru oke na njedebe nke ule ahụ. nzuzo.
Ọzụzụ na osisi anyị
Anyị na-enye ọzụzụ na osisi (mmezi oge, mmezi igwe,
usoro nchịkwa na nchekwa ...), usoro ọzụzụ ahaziri iji gboo mkpa gị.
N'ime ụlọ nyocha anyị, anyị nwere ike ịnye ọzụzụ maka ndị na - akpọghachi gị ọrụ.
Ha nwere ike tinye tiori ozugbo na mmemme.
Ọzụzụ na saịtị ndị ahịa
Anyị maara ụlọ ọrụ nhazi, anyị makwaara na mgbe akụrụngwa ahụ dara, ọ ga-efu gị nnukwu ego. N'ihi ya, DTS etinyela usoro siri ike na ihe eji arụ ọrụ na igwe anyị niile. Ọbụna anyị laabu na nnyocha igwe na-arụpụtara na ulo oru-ọkwa mmiri. Site na ngwungwu njikwa anyị dị elu, ọtụtụ nsogbu nsogbu akụrụngwa nwere ike ịme kọmputa site na modem.Ma, mgbe ịchọrọ nkwado osisi, ọbụlagodi sistemụ nkwado kachasị elu enweghị usoro iji nweta onye ọrụ DTS ma ọ bụ injinia na saịtị. Ndị ọrụ anyị nwere ike inyere gị aka iweghachite igwe gị ma rụọ ọrụ.
Distribution Okesa ikuku na ikpo oku
Na DTS, ọ dị oke mkpa na anyị ga - enyere ndị ahịa aka ịhọrọ nzaghachi ziri ezi wee soro ha rụọ ọrụ iji bulie iji, arụ ọrụ na mmezi nke akụrụngwa. usoro ndị ndụmọdụ iji hụ na arụ ọrụ anyị na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ n'ụzọ kachasị nchebe, nke kachasị mma na nke ọma.
Ọ bụrụ na a ga-ebupụ ngwaahịa gị na United States, ma ọ bụ ọ bụrụ na akụrụngwa gị bụ nke nrụnye izizi, ma ọ bụ ọ bụrụ na nlọghachi gị na-arụ nnukwu nrụzi, ị ga-mkpa kesaa nkesa okpomọkụ na nnwale okpomọkụ ịbanye.
Anyị nwere akụrụngwa niile dị mkpa maka ule dị otu a. Anyị azụrụ ngwa ọrụ pụrụ iche (gụnyere ihe ndekọ data) yana sọftụwia nyocha data iji mee nnwale ahụ n'ụzọ ziri ezi n'okpuru ọnọdụ kacha mma dị ka ihe ị chọrọ wee nye gị akụkọ miri emi na nke zuru ezu.
Kemgbe ọ malitere, DTS ejirila ụlọ ọrụ na-edozi nri, na-enye ndị nhazi nke obere acid acid (LACF) na ihe ọveraụ beụ na-enyere ha aka ịhazi usoro mmepụta nri na nchekwa. ihe ngwọta na ọrụ ndozi maka ndị ahịa na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ n’ụwa niile.
Approval Nkwado FDA
Nyefe faịlụ FDA
Ọrụ anyị na ịrụ ọrụ na mmekorita ya na ndị mmekọ mba ụwa pụrụ iche na ọrụ ọrụ FDA na-enyere anyị aka ịchịkwa ụdị ọrụ a. Kemgbe ọ malitere, DTS ejirila ụlọ ọrụ na-edozi nri, na-enye ndị nhazi nke obere acid acid (LACF) na ihe ọveraụ beụ na-enyere ha aka ịhazi usoro mmepụta nri na nchekwa. ihe ngwọta na ọrụ ndozi maka ndị ahịa na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ n’ụwa niile.
Nyocha ike oriri
Taa, oriri ike bụ ihe ịma aka na ọkwa ọ bụla. Enyocha ike chọrọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere taa. Maka ezigbo arụmọrụ, nyocha kwesịrị ime na ọkwa mbụ nke ọrụ ahụ.
Gini mere iji choro nyocha ike?
- finkọwa ike chọrọ,
- Kọwaa ihe ngwọta teknụzụ kwesịrị ekwesị (njikarịcha ohere, akụkụ ọrụaka, ogo nke akpaaka, ndụmọdụ ndị ọkachamara ...).
Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ ịkwalite na belata ike oriri na akụrụngwa, ọkachasị na mmiri na uzuoku, nke bụ nnukwu nsogbu nkwado nke 21st narị afọ.
DTS enwetawo ezigbo ikike na ibelata ụgwọ ike. Ihe ngwọta anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka belata oke mmiri na mmiri uzuoku.
Dabere na nyocha, ọnụ ọgụgụ nke ọrụ nlọghachi, yana ọnọdụ ọrụ ọrụ nke saịtị ndị ahịa, anyị nwere ike ịnye ndị ahịa ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ dị mfe.
Kpọọ anyị +86 536-6549353